Barcode | Happy Sales - POS Supply
ကျွန်မတို့ နေ့စဥ်အသုံးပြုနေကြတဲ့ Productတွေရဲ့ ဘေးမှာပါတတ်တဲ့ ဒေါင်လိုက်အစင်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ခဲ့ဖူးကြပါတယ်။ ဘာလေးတွေလဲဆိုပြီး သိချင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီဒေါင်လိုက်အစင်းလေးတွေကို Barcodeလို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ Barcodeအကြောင်း Knowledgeလေးအနည်းငယ်ကိုဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်...
ဟိုးအရင်ခေတ် နည်းပညာမတိုးတက်ခင်ကာလများမှာတော့ Productတွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မရောထွေးစေရန်အတွက် ID နံပါတ်တွေပေးပြီး လက်နဲ့ရေးကာ မှတ်သားခဲ့ကြရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီProductတွေရဲ့ IDတွေကို Machine Readable (စက်နဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့) Code တွေနဲ့ ဖော်ပြလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီCodeတွေကို Barcodeလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Barcode တွေဟာ Machine Readable ဖြစ်တဲ့အတွက် Code ဖတ်တဲ့အခါ သာမန်Code တွေထက် ပိုမိုတိကျ မြန်ဆန်ပါတယ်။ Barcodeတွေကို အနက်ရောင်ဒေါင်လိုက်အစင်းပုံစံ သင်္ကေတလေးတွေနဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီသင်္ကေတလေးတွေထဲမှာ Dataတွေကို ဒေါင်လိုက်မျဥ်းလေးတွေရဲ့ အထူအပါး၊ အစိပ်အကြဲတွေနဲ့ ကိုယ်စားပြုပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်လိုက်Barcodeလေးတွေကိုတော့ one-dimensional(1D) Barcodeလို့ခေါ်ကြပြီး Barcode Scanner/Readerတွေနဲ့ Scanဖတ်မှသာ dataတွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ 1D Barcode format တွေကတော့ - Code 39, Code 128, UPC နဲ့ EANတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ two-dimensional(2D) Barcodeအမျိုးအစားတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လေးထောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိကြပါတယ်။ အစက်အပျောက်၊ Geometric patternပုံစံတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားကြပါတယ်။ 2D Barcodeတွေကိုတော့ ပုံမှန် 1D ဖတ်တဲ့ Scannerတွေနဲ့ ဖတ်လို့မရပဲ 2D Scannerတွေ၊ Smart Phoneတွေမှာပါဝင်တဲ့ Built-Inကင်မရာရယ် Application Softwareရယ် ပေါင်းစပ်မှသာ ဖတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2D Barcodeတွေဟာ 1Dတွေထက်ပိုပြီး Dataပမာဏများများကို ပိုပြီး သိမ်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - 1D Barcode ကို အသုံးပြုပြီး ID, Code စတဲ့ Data အနည်းငယ်ကိုသာ မှတ်သားနိုင်ပြီး၊ 2D Barcode တွေကတော့ Product ရဲ့ Code နံပါတ်အပြင် အမည်၊ အမျိုးအစား၊ Manufacture, Country of Origin စသဖြင့် အချက်အလက်များကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မှတ်သားပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ 2D Barcode format တွေကတော့ Data Matrix နဲ့ Quick Response(QR) Codeတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ Barcodeတွေကို Computer System တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနေကြတာကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။
ဒါဆို... ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုနေကြတာလဲ?
ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ နယ်ပယ်မှာတော့ Barcodeတွေကို လူနာတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ID နံပါတ်တွေပေးပြီး၊ Personal Dataတွေ၊ ဆေးကုသတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို သိမ်းဆည်းဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများတွင်လည်း Barcodeဟာအရေးပါတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေပါတယ်။ မိမိပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းဟာ ဂိတ်ဘယ်နှခုကို ဖြတ်ကျော်ပြီးပြီလဲ? ဘယ်နားကိုရောက်နေပြီလဲ? ဆိုတာတွေကို ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှာပါတဲ့ Barcodeလေးကို Scanဖတ်လိုက်တိုင်း ပို့တဲ့သူဘက်မှာ သိနိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းကို အကျိုးကျေးဇူးများပြီး ပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ပျက်သွားမှာ မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။
Productရောင်းချတဲ့နေရာမှာလည်း POS Systemနဲ့တွဲဖက်ကာ Barcodeလေးတွေ သတ်မှတ်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် အမှားအယွင်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ ရောင်းဝယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Customer တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Dataများကို POS Systemထဲသို့ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းကာ Member Cardများ၊ Discount Cardများမှာ Barcodeလေးတွေထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Loyal Customerတွေကို သိရှိနိုင်ပြီး Follow Upလိုက်ရာမှာလည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Productတွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း Product တစ်ခုချင်းစီကို Barcodeလေးတွေပေးခြင်းအားဖြင့် Productတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရောထွေးမှာလည်း မပူရတော့ဘူးပေါ့။ Productတိုင်းမှာ Barcodeရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကိုယ်ပိုင်Productထုတ်လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေကိုလည်း Barcodeလေးတွေ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Internation‌al Standardနဲ့ညီတဲ့ Barcodeလေးတွေသုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
(Ps : Barcode Standard အကြောင်းကိုတော့ နောက်ထပ်Postတစ်ခုမှာ အကျယ်တစ်ပွင့် ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်နော်)
ဒီနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းတော်တော်များများဆိုင်တော်တော်များများမှာ Barcode Systemကို POS Systemများနဲ့ တွဲဖက်ကာ အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းမှာ POS နဲ့ Barcode System အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆက်ပစ္စည်းလေးတွေကို ကျွန်မတို့ရဲ့ Happy Sales - POS Supplyမှာ ယုံကြည်စိတ်စွာနဲ့ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါပြီရှင့်။
# Barcode POS